RITAA Activities and Achievements – HlaMin
U Wynn Htain Oo’s post
EC for 2018 – 2020
With the dawning of the Pwint Linn Era, RIT-YIT-YTU Alumni Association was allowed to register, but many alumni were not aware of the association and its objectives. Onlyafew (mostly members of the “80000 YaThay”) actively participated in the formative events. There was virtually no fund to operate (let alone assist the alma mater)
The office space for the Alumni Association was provided by YTU
U Wynn Htain Oo (M72)’s post based on RITAA Report.
Some annotation provided by Yours Truly.
Alumni Association isarequirement to get YTU accredited.
၁။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ (accreditation) ရယူရာတွင် တရားဝင်ကျောင်းသားဟောင်း အဖွဲ့အစည်း ရှိခြင်းနှင့် သင်ရိုး ပုံမှန်အဆင့်မြင့်မှူများတွင် ကျောင်းသားဟောင်း အဖွဲ့အစည်းမှ တဆင့် လုပ်ငန်းခွင်၏ အကြံပြုချက်များ ရယူခြင်းသည် လိုအပ်ချက် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
First step to establish RITAA started in March 2016 with the help of YTU Management and the Organizers of Shwe YaDu Celebration
၂။ ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ လမ်းညွန် ညှိနှိူင်းမှူဖြင့် ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ရွှေရတုပွဲ (၂၀၁၄) ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင်များကို ဖိတ်ကြားပြီး ကျောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့အစည်း တရားဝင် ဖြစ်တည်ရန် ဆောင်ရွက်မှူကို ၂၀၁၆ခုနှစ် မတ်လတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။
Drafting and approval of Bye Law
၃။ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း မူကြမ်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး (၄)ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီး၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လ (၅)ရက် အစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန် စက်မှူတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း အတည်ပြုပါသည်။
၄။ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ ဖြစ်မြောက်ရေး အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီကို ၂၀၁၆ ဇွန်လ (၁၃) ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းပါသည်။
Interaction with MEC
၅။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူရယူရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေး အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ စစ်ဆေးမှူများတွင် ရန်ကုန် စက်မှူတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့မှ ကျောင်းသားဟောင်း ပါဝင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည်များ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလမှ စတင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Visit by evaluators from Asian Pacific Engineering Association
၆။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူရယူရန်အတွက် အာရှပစိဖိတ် အင်ဂျင်နီယာ အသင်းချူပ် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ စစ်ဆေးသူများ လာရောက် စိစစ်မှူ (၂)ကြိမ်တွင် ရန်ကုန် စက်မှူတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့မှ ကျောင်းသားဟောင်း ပါဝင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည်များ ပါဝင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Role in SPZP-2006 Planning and Implementation
၇။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် World Wide ဆရာပူဇော်ပွဲ (၂၀၁၆) ဖြစ်မြောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပမှူများအတွက် ဦးဆောင် ကော်မတီ၊ လုပ်ငန်း ကော်မတိများတွင် ရန်ကုန် စက်မှူတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ အလုပ်အမှူဆောင်များ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၈။ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင် အဖွဲ့မှ ပြည်တွင်း အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ကို မှတ်ပုံတင် အမှတ် ၁/ပြည်တွင်း/၀၄၈၇ ဖြင့် ၂၀၁၇ ဇွန်လ (၂၉ ) ရက်နေ့တွင် ရရှိပါသည်။
Criteria for the accreditation of Post graduate courses
၉ ။ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ ကောင်စီ အင်ဂျင်နီယာ ပညာရေး အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ အမျိူးသားအဆင့် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူကို ရန်ကုန် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့သင်တန်း (၇) မျိူးနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့သင်တန်း (၄)မျိူးအတွက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
2018 Graduates to be assessed by Asia Pacific Engineering Association
၁၀ ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ထွက်ပေါ်လာမည့် ပထမဆုံး ၆နှစ် အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့သင်တန်း ဘွဲ့ရများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် လာရောက်မည့် အာရှ ပစိဖိတ် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ချူပ် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ စစ်ဆေးသူများ၏ စိစစ်မှူ အောင်မြင်လျှင် အာရှ ပစိဖိတ်အဆင့် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ ရရှိပါမည်။
Fund raising for YTU Library Modernization
၁၁။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် အာရှ ပစိဖိတ်အဆင့် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များတွင် တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်သော အဆင့်မှီ သင်ကြားသင်ယူမှူ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လက်ရှိ စာကြည့်တိုက်ကို နိုင်ငံတကာအဆင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် Resource Center ပေါ်ထွက်ရေးအတွက် အလှူငွေ သိန်း (၄၀၀၀) ကျော် ရရှိအောင် လှူံဆော်ကောက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Travel grant for staff to undergo Library Training in Singapore
၁၂။ စာကြည့်တိုက် ၀န်ထမ်းများ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးအတွက် ၀န်ထမ်း (၄) ဦး စင်္ကာပူနိုင်ငံ တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်များ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်နိုင်ရန် အလှူရှင် ရှာဖွေ စီစဉ် ပေးခဲ့ပါသည်။
Trying to fulfill requirements for Accreditation
၁၃။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် အာရှ ပစိဖိတ်အဆင့် အရည်အသွေး အာမခံချက် အသိအမှတ်ပြုမှူ ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များပြည်စုံရန် ဘက်စုံ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီများတွင် ရန်ကုန် စက်မှူတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ အလုပ်အမှူဆောင်များ ကဏ္ဍအသီးသီးမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
Financial aid for eligible needy YTU students
၁၄။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိပြီး ပညာသင်စရိတ် အခက်အခဲ ဖြစ်နေသူများအတွက် ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့မည့် အလှူရှင်များ ရှာဖွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Teacher’s Corner (for recreation)
၁၅။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဆရာဟောင်းမျာုးကျောင်းသို့ လာရောက်စဉ် အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်ရန် Teachers’ Corner ကို ဖွင့်လှစ် ထားရှိပေးပါသည်။
Finding donors to support RIT athletic associations
၁၆။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ဘာသာရပ်အလိုက် အားကစား အသင်းအဖွဲ့များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့မည့် အလှူရှင်များ ရှာဖွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
Finding donors to support Maker Space (of YTU Student Union)
၁၇။ ရန်ကုန် နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ Maker Space အတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အလှူရှင် ရှာဖွေ ဖြည့်ဆည်းပေးထားပါသည်။
RITAA hosted SPZP-2016 with the help of sponsors, donors and well-wishers.
RITAA is helping with the YTU Library Modernization Project.
Several alumni have joined RITAA as Life Members.
EC for RITAA (2018 – 2020)
ဥက္ကဋ္ဌ – ဦးမျိုးအေး M94
ဒုဥက္ကဋ္ဌ – ဦးတင်လတ် M85
ဒုဥက္ကဋ္ဌ – ဦးလှဝင်း M75
ဒုဥက္ကဋ္ဌ – ဦးစန်းကြူ Ci87
ဒုဥက္ကဋ္ဌ – ဦးစိုးမြင့် Mn1983
ဒုဥက္ကဋ္ဌ – ဦးခင်မောင်လွင် M91
General Secretary- ဦးအောင်ခိုင်M98
တွဲ ၁ – ဦးကောင်းမြတ်စိုး Ec2003
တွဲ ၂ – ဦးအောင်ဆန်း M77
တွဲ ၃ – ဦးတင့်ကြိုင် Petro94
တွဲ ၄ – ဒေါ်လှသန္တာသိန်း M92
တွဲ ၅ – ဒေါ်အေးအေးခိုင် M93
ဘဏ္ဍာရေးမှူး – ဦးကျော်လှိုင် M86
တွဲ ၁ – ဒေါ်နန်းခင်နွဲ့ M92
တွဲ ၂ – ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း EP79
တွဲ ၃ – ဦးတင်ထွန်းအောင် M75
ပြန်ကြားရေး – ဦးကျော်စိုး M81
တွဲ ၁ – ဦးကျော်ဆန်း Ci81
တွဲ ၂ – ဦးကိုလေး M91
တွဲ ၃ – ဒေါ်ပြုံးပြုံးဦး Ci79
စာရင်းစစ် – ဦးတင်ဦး M87
တွဲ ၁ – ဦးမောင်မောင်သန်း M81
တွဲ ၂ – ဦးဝင်းမောင် Ci79
တွဲ ၃ – ဦးကျော်ကျော်ငယ် Ec95
၁။ ဦးဇာနည်ထွန်း Ec78
၂။ ဦးဝင်းနောင် M92
၃။ ဦးသန့်စင် M82
၄။ ဦးသန်းဝင်း M77
၅။ ဒေါ်မေသက်လှိုင် M96
၆။ ဦးမောင်မောင်အုန်း Mn79
၇။ ဒေါ်ခင်ဆွေဦး Ci84
၈။ ဦးမျိုးမြင့် Ci85
၉။ ဦးပြည့်ဖြိုးကို Ec2003
U Myo Aye (President, RITAA) donated K5 Lakhs for the Fund to pay salary to RITAA employees.
U San Kyu (Vice President), U Aung Khaing (General Secretary), U Kaung Myat Soe (Joint Secretary), and U Maung Maung Than (Joint Auditor) donated K2 Lakhs each.